Abantu namaqembu abaqonde ibanga elihanjwa ukukhangisa - Bayede News
Isithombe: Amazulu FC
Ngisho izinkampani ezinkulu ezidume umhlaba wonke namaqembu kanobhutshuzwayo amakhulu emhlabeni abayeki ukuzimaketha ngoba bayakwazi ukubaluleka kwalokhu.
Uma ungusomabhizinisi ukuze impahla yakho oyidayisayo noma ngabe eyaluphi uhlobo ithengwe kumele ukwazi ukuyimaketha.
Ngokuyimaketha kuzokwenza ukuthi inakwe umuntu noma ngabe ukude kangakanani nayo, aheheke ukuthi ayithenge ngelinye ilanga.
Emasontweni amabili edlule kube nenkulumo ethi; “Izintatheli zaKwaZulu-Natal ikakhulukazi eThekwini zeseka AmaZulu FC ngoba enza kahle”. Le nkulumo yashiwo umqeqeshi weLamontville Golden Arrows uMandla Ncikazi.
Ngenhlanhla wathi esanda ukusho leyo nkulumo, kwabe sekuba nesithangami sabezindaba esasiseMoses Mabhida esasibadakanya womabili la maqembu (iLamontville Golden Arrows na-AmaZulu FC). Enye yezintatheli yamhloma lo mbuzo uNcikazi ukuthi kungani esho lokhu okungenhla wawubalekela ukuwuphendula, yaphinde enye yambuza umbuzo ofanayo kodwa ngendlela ehlukile.
Wagcina esezijwiba ewuphendula ethi wayengasho kabi kodwa wayencoma abaMaZulu ngokuthi bayakwazi ukukhangisa iqembu labo, kodwa izintatheli ngathi sezisebenzela wona.
AmaZulu FC ngaphandle kokuthi enze kahle kule sizini kodwa iqiniso naseminyakeni edlule abekwazi ukuzimaketha. Uma kungabhekwa amaphephandaba eminyakeni edlule kakhulukazi lawa akithi, akhuluma ngalo Usuthu noma kuthiwa lubi okanye luhle udaba.
Ngikhuluma nje luze luvika izembe lwaluhlezi lusemaphephandabeni udaba oluthinta Usuthu. Ukufika kukaMnu uSandile Zungu kunezelele entweni ebivele ikhona njengoba uPhumlani Dube wezokumaketha kuleli qembu enza kahle kakhulu, noBrilliant Mkhathini naye wenza isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuthola noma imuphi umdlali omfunayo.
Ukuthola umdlali akusizi yena kodwa kusiza khona ukumaketheka kweqembu. Khona kubukeka kabi ukuthi ngathi izintatheli zithanda AmaZulu FC, kunakeka lokho ngoba edlala kahle nangamasizini edlule abenakwa.
Ngesikhathi abalandeli baleli qembu bezifikela mathupha ejimini bekhala ngezimfuno zabo alikho iphephandaba elingabikanga ngalokho.
Ngesikhathi kukhotheme iSILO Samabandla Onke, AmaZulu FC ilona kuphela iqembu likanobhutshuzwayo elahambela eNdlunkulu ukuyoyikhalisa.
Ngeledlule leli qembu livakashele izindlu zokusakaza zo-Ukhozi FM lapho liphe abasakazi balesi siteshi amajezi abhalwe amagama abo, okubalwa uMroza Buthelezi, uSgqemeza noNolwazi Machi.
Ezinsukwini ezimbalwa nje Usuthu luhambisele eHhovisi liMengameli we-Inkatha Freedom Party (IFP) uMnu uVelenkosini Hlabisa ijezi elibhalwe “Mphoswa”.
Ngikholwa ukuthi amaqembu amancane angafunda lukhulu ku-AmaZulu FC ngokuthi akwazi ukukhangisa amaqembu awo, nokuthi akhulule abadlali bawo ukuthi bakhulume nabezindaba. Njengoba ngishilo ukukhuluma komdlali akusho ukusiza yena kodwa kusiza iqembu lonke.
Kunamaqembu okuthi uma kubhalwe ngawo emaphephandabeni uthole ukuthi kukhulume umphathi walo noma olikhulumelayo, uxakeke ukuthi kuzodlala bona yini laba ngoba inhloso enkulu yezintatheli ukukhuluma nabadlali noma umqeqeshi.
IMTN, iVodacom, iCoca Cola, iSAB yizinkampani ezinkulu ezaziwa umhlaba wonke kodwa ngeke ungasiboni isikhangisi sazo ngoba zisiqonda kahle isidingo sokukhangisa.
Lapha eNingizimu Afrika kuneKazier Chiefs, ngaphandle kokuba iqembu elikhulu, kodwa iyakwazi ukuzikhangisa ingakho uhlezi ubona kukhulunywa ngayo emaphephandabeni nasezinkundleni zokuxhumana. Inkulu nje iyaqhubeka nokuzikhangisa nsuku zaphuma.
E-England zonke izinsuku, ababhali bezemidlalo bakhona bahlezi begqamisa abadlali bakhona abanendaba nabakwamanye amazwe. Lokho kusho ukuthi bakhangisa abadlali babo ukuze banakeke.
nguSabelo Maphumulo May 14, 2021